Baiboly pejy 672 - Ny Baiboly
Voalohany < 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 Manaraka Farany
Galata toko 2 (tohiny)
17Fa raha ilay mitady hohamarinina ao amin'ny Kristy iny isika no amin'izay ny tenantsika aza no hita mpanota, dia ho mpandraharahan'ny ota àry ny Kristy? Sanatria izany! 18Fa raha izay noravako no atsangako indray, dia miampanga tena ho mpandika mihitsy aho, 19satria noho ny Lalàna no nahafatesako ny amin'ny Lalàna, mba ho velona ho an'Andriamanitra aho. Niara-nofantsihana tamin'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana aho, 20ka matoa velona aho, dia tsy izaho intsony no velona, fa ny Kristy no velona ato anatiko. Eny, izao ahavelomako amin'ny nofo ankehitriny izao no ahavelomako amin'ny finoana ny Zanak'Andriamanitra, ilay efa tia ahy, sy nanolo-tena hamonjy ahy. 21Amin'izany dia tsy mahafoana ny fahasoavan'Andriamanitra aho; fa raha ohatra ka avy amin'ny Lalàna kosa ny fahamarinana, dia ho maty foana ny Kristy.
Galata toko 3
Ny amin'ny Lalàna sy ny finoana - Ny finoana no ahazoana ny fahamarinana - Ny tsy nahafoanan'ny Lalàna ny teny fampanantenana - Niala ny Lalàna nony tonga ny finoana.
1Ry Galata adala! iza no dia nandrebireby anareo, nefa he fa voapetaka tsara teo imasonareo Jesoa mifantsika! 2Izao ihany no tiako ho fantatra aminareo: ny asan'ny Lalàna va no nandraisanareo ny Fanahy, sa ny fihainoana ny finoana? 3Ahoana no dia mahakely saina anareo loatra toy izany, fa nanomboka tamin'ny fanahy hianareo, ka dia hiafara amin'ny nofo indray ve? 4Dia ho nahafantatra foana zava-mahagaga toy izany va hianareo? Ka asa raha tsy ho foana tokoa! 5Izay manome anareo ny Fanahy, sy mahavita asa lehibe eo aminareo, amin'ny asan'ny Lalàna va no anaovany an'izany, sa amin'ny fihainoana ny finoana?
6Izany tokoa no ilay voasoratra hoe: Nino an'Andriamanitra i Abrahama, ka dia notanana ho fahamarinany izany. 7Koa fantaro àry fa izay amin'ny finoana no zanak'i Abrahama. 8Ary tsinjon'ny Soratra Masina rahateo fa amin'ny finoana no anamarinan'Andriamanitra ny jentily, ka nilaza vaovao mahafaly tamin'i Abrahama izy, nanao hoe: Aminao no hanaovan'Andriamanitra ny firenena rehetra. 9Dia miara-kasoavina amin'i Abrahama mpino amin'izany, izay amin'ny finoana. 10Fa izay miankina amin'ny asan'ny Lalàna kosa dia voaozona, araka ny voasoratra hoe: Voaozona izay rehetra tsy maharitra manatanteraka ny zavatra rehetra voasoratra ao amin'ny bokin'ny Lalàna. 11Sady hita miharihary raha ny hoe tsy misy olona hamarinina amin'ny Lalàna eo anatrehan'Andriamanitra, satria amin'ny finoana no hiveloman'ny marina. 12Ary ny Lalàna dia tsy amin'ny finoana, fa amin'ny fanatanterahana azy no ahavelomana aminy. 13Nanafaka antsika tamin'ny ozon'ny Lalàna anefa ny Kristy, fa tonga voaozona hisolo antsika satria voasoratra hoe: Voaozona izay rehetra mihantona amin'ny hazo, 14mba ho tonga amin'ny jentily, ao amin'ny Kristy Jesoa, ny tso-drano nampanantenaina an'i Abrahama; dia horaisintsika amin'ny finoana koa ny fampanantenana ny Fanahy.
15Ry rahalahy, miteny araka ny fanaon'ny olona aho; na ny fanekena ataon'ny olona fotsiny aza, rahefa vita mafy, dia tsy azon'olona foanana na ovana. 16Ary ilay fampanantenana natao tamin'i Abrahama sy ny taranany, izay tsy ataony hoe: ny taranany toy ny milaza maro, fa ny taranako, hoy izy, toy ny manondro tokana, izany hoe ny Kristy, 17dia izao, hoy aho: fanekena mafy efa nataon'Andriamanitra izany, ka raha izay Lalàna natao telopolo amby efa-jato taona taty aoriana, dia tsy mahafoana izany, na mahafoana ny teny fampanantenana. 18Fa raha ho avy amin'ny Lalàna ny lova, dia tsy ho avy amin'ny teny fampanantenana intsony, nefa teny fampanantenana no nataon'Ándriamanitra tamin'i Abrahama hahazoana izany fahasoavana izany.
19Naninona àry ny Lalàna? Nanampy fotsiny izy, noho ny fandikana, mandra-pihavin'ilay taranaka nanaovana ny fampanantenana: anjely no namoaka azy teo an-tànan'ny mpanalalana anankiray. 20Ka izany hoe mpanalalana dia tsy an'ny irery, fa Andriamanitra kosa no irery. 21Manohitra ny fampanantenan'Andriamanitra va àry ny Lalàna? Sanatria izany. Saingy raha Lalàna afaka nahavelona no nomena, dia ny Lalàna ihany no ho nihavian'ny fahamarinana. 22Fa nohidian'ny Soratra Masina tao amin'ny fahotana izao rehetra izao, mba ho ny finoana an'i Jesoa-Kristy no hahazoan'izay mino, ny fampanantenana. 23Fa fony tsy mbola tonga ny finoana, dia nohidiana hambenan'ny Lalàna isika, mba ho amin'ny finoana izay efa haseho aty aoriana.
24Ny Lalàna àry dia toy ny mpitaiza nitarika antsika ho amin'ny Kristy, mba hohamarinina amin'ny finoana isika. 25Koa nony tonga ny finoana, dia tsy fehezin'izay mpitaiza intsony isika; 26fa efa zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ao amin'i Jesoa-Kristy hianareo rehetra. 27Satria hianareo rehetra natao batemy ho an'ny Kristy, dia nitafy ny Kristy avokoa. 28Ka tsy misy Jody na jentily intsony; tsy misy andevo na tsy andevo, tsy misy lahy na vavy intsony, fa tena iray ihany hianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesoa. 29Ary raha an'ny Kristy hianareo, dia taranak'i Abrahama tahaka azy, ka mpandova araka ny fampanantenana.
Galata toko 4
Tsy ho ambanin'ny Lalàna intsony isika - Ny nitiavan'ny Galata an'i Paoly voalohany - Agara sy Sarà ohatra amin'ny Lalàna sy ny Evanjely.
1Ary izao, hoy aho: Raha mbola zaza ny mpandova, dia tsy misy hafa noho ny mpanompo, na dia izy aza no tompon'ny zavatra rehetra; 2fa fehezin'ny mpitaiza sy ny mpitandrina azy izy, mandra-pahatongan'ny fetr'andro voatendrin'ny rainy. 3Toy izany koa isika: fony mbola zaza, dia nandevozin'ny abidim-pianaran'izao tontolo izao isika; 4fa rahefa feno ny andro, dia nirahin'Andriamanitra ny Zanany, nateraky ny vehivavy, sy nateraka teo ambanin'ny Lalàna, 5mba hanafaka izay teo ambanin'ny Lalàna, sy handraisantsika ny fananganan-janaka. 6Ary noho ny maha-zanaka anareo, dia nirahin'Andriamanitra ho ao anatin'ny fonareo ny Fanahin'ny Zanany, ka miantso hoe: Aba, Ray! 7Koa tsy mpanompo intsony àry hianareo, fa zanaka, ary rahefa zanaka dia mpandova koa, noho ny ataon'Andriamanitra.
8Teo aloha, fony tsy mbola nahalala an'Andriamanitra hianareo, dia nanompo andriamanitra tsy izy tokoa. 9Fa ankehitriny kosa efa nahalala an'Andriamanitra hianareo (na hoe: Andriamanitra no nahalala anareo), ka ahoana no dia ireny fampianarana malemy sy tsy misy na inona na inona ireny indray no iverenanareo sy tianareo hotompoina? 10Mbola manaraka tonon'andro amam-bolana, ary taona amam-potoana hianareo! 11Matahotra aho ny aminareo, fa sao dia sasa-poana taminareo.
12Mihanta aminareo aho, ry rahalahy, aoka ho tahaka ahy hianareo, fa izaho koa mba efa tahaka anareo ihany. Tsy naninon-tsy naninona ahy akory hianareo. 13Fony aho vao nitory voalohany ny Evanjely tany aminareo, dia hitanareo ny halemen'ny nofoko, ary tonga fakam-panahy ho anareo izany; 14nefa tsy mba naneso na nihataka tamin'izany hianareo, fa vao mainka koa nandray ahy toy ny anjelin'Andriamanitra na tahaka ny Kristy Jesoa aza. 15Koa lasa nankaiza àry ilay fankamamianareo ahy nahasambatra anareo? Fa izaho no vavolombelonareo fa raha azo natao, na dia ny masonareo aza, dia ho nombotanareo homena ahy fahizany. 16Sa dia tonga fahavalonareo indray aho, fa nilaza ny marina taminareo?
Pejy: Voalohany < 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 Manaraka Farany
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.2966 seconds